Talooyin iyo Taageer U Dabaaldeg Guulaha
U Dabaaldegidda Guuleysiga
Ka guuleysiga nikotiinka waa wax aad u weyn—sida, Wayni ah sida guusha banaan u baxa wadada. Taasi waa sababta aan u wadaageyno sheekooyinkan. Sheeko walba waa sida u dabaaldegid guul banaan u bax u gaarka ah ee guusha qof adiga oo kale ah. Sidaa darteed marka sii wadida iska joojintaadu ay adkaato, eeg mid ka mid ah sheekooyinkaa si aad u hesho dhiirrigelin dheeraad ah.
Ma Heysaa Sheeko Iska Joojin oo adiga kuu Gaar ah? Wadaag!
Qaado guuleysiga oo u dabaaldeg guushaada ka guuleysiga nikotiinka adigoo wadaagaya sheekadaada. Faa’iido dheeraad ah? Waa hab fiican oo lagu dhiirigeliyo dadka kale ee isku dayaya inay iska joojiyaan.